Labo Wadan oo isku heysta qofka ugu da'da weyn Caalamka & muran Xoogan arinkaasi ka taagan(Daawo Sawirada) - iftineducation.com
iftineducation.com – China iyo Japan sanadihii u dambeysay waxaa ka dhaxeysay dagaal xaga dhaqaalaha iyo siyaasada , waxaana hada dagaalkooda ku soo biirey dadka aadka da’da ah ee ku nool labada dal .
Bishaan bilowgeedi ayey aheyd markii nin u dhashey dalka Japan loo aqoonsadey qofka ugu da’da weyn caalamka waxaa warkaasi gaashaanka u daruuurey haweeney u dhalatey dalka China oo sheegtey in ay tahay qofka ugu da’da weyn caalamka.
Jiroemon kimura oo ah ninka u dhashey dalka Japan ay da’diisu tahay 115 sano dhasheyna 1897 sidaas daraadeedna ku qaadey qofka ugu da’da weyn caalamka balse maalmo kaddib ayaa haweeney lagu magacaabo Ms Lou oo u dhalatey dalka China ayaa sheegtey in ay jirto 127 sano.
Kaarka dhalashada aqoonsiga oo ay u soo bandhigtey saxaafada ayaa ku qorneyd in ay dhalatey 1885 sidaas daraadeedna ay tahay qofka ugu da’da weyn caalamka.
Sikastaba ha ahaatee Guinness world recods oo ah hay’ada qorta dhacdooyinka caalamka ayaa ku mashquulsan sida ay u kala saari laheyd labadaan duqoyshin oo isku heysata qofka ugu da’da weyn caalamka iyagoona ugu dambeyn shaacin doonta cida rasmiyan aduunka ugu da’da weyn..